संघीयता असफल पार्नेको सहयोगी बन्दै त छैनन् महरा र पौडेल ?
काठमाडौं । संघीयतालाई असफल पार्ने डिजाइनकर्ताको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एमालेका कतिपय शीर्ष नेता नै सहयोगी बनेको आभास भइरहेको छ ।
संघीयता राजनीति हो । संघीयता कार्यक्रम हो । यो विकेन्द्रीकरण हो । जनताको शासन व्यवस्थामा पहुँचको कुरा हो । जनताको तख्ता हो यो । सिंहदरवारको शासन व्यवस्थालाई जनताको घरगाउँमा ल्याउने अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न माओवादीले देशमा संघीयताको प्रस्ताव ग¥यो । एउटा प्रणालीमा चल्दा अर्काे ढंगले जाँदा तत्काल केही जटिलता आउन सक्छ । नेतृत्वले जटिलतालाई समाधान गर्ने हो । आफैं समस्या बन्ने नेतृत्व होइन ।
आज संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने बेलामा वर्गीय राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्ने माओवादी केन्द्र र एमालेका कतिपय शीर्ष नेता नै क्षेत्रीय संकीर्णता देखाइरहेका छन् । जनताको मनोविज्ञानमा ‘ब्लाकमेलिङ’ गरिरहेका छन् । जनता जनताबीचमा भिडाउने कार्यको अगुवाइ गरिरहेका छन् ।
बुटवल प्रदेशको राजधानी हुनुपर्छ भन्दै एमालेका नेता विष्णु पौडेल र माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझी ज्यान छाडेर लागेका छन् । त्यस्तै दाङ राजधानी हुनुपर्छ भनेर माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा र एमालेका नेता शंकर पोखरेल लागिरहेका छन् । उनीहरु दुवै पक्षले यसलाई आआफ्नो प्रतिस्ठाको विषय बनाएका छन् र पोजिशन बनाएर जनतालाई सडकमा उतार्ने मसला दिइरहेका छन् । उनीह?को देखासिकी गर्दै देशका अन्य भागमा पनि प्रदेश राजधानीको मुद्दा उठाएर यो संघर्ष चर्कने संकेत देखिएको छ ।
वुटवल, दाङ राजधानी जहाँ बनाए पनि एकाध घण्टाको गाडीको दुरी हो । दुवै ठाउँमा प्रदेशका कार्यालय खोलेर समन्वय गर्न पनि सकिन्छ । जनताको पहुँचमा शासन व्यवस्था ल्याउने भन्ने कुरा मुख्य हो । कुन ठाउँमा प्रदेश राजधानी बनाएर दुई/चार लाखको घरघडेरीको मूल्य बढ्छ, दुई चार लाखको व्यापार बढ्छ भन्ने चेतनाका आधारमा कृष्णबहादुर महरा, विस्णु पौडेल, शंकर पोखरेल र टोपबहादुर रायमाझी लाग्दा संघीयता नै असफल पार्नेहरुको मनोबल बढाएका छन् ।
वाम एकीकरण, सरकार निर्माण र समृद्धिको मुद्धा तुहिन्छ कि भन्ने चिन्ता अहिले छ । कांग्रेससहित दक्षिणपन्थीले के निहुँ पाउँ र यो प्रक्रियालाई असफल पारौं भनेर लागिरहेको बेलामा महरा, पौडेल जस्ता शीर्ष नेताहरु संकीर्ण क्षेत्रीयतावादी नारा दिएर जनता जनताबीच अन्तरविरोध पैदा गरेर भिडाउने काममा किन लागिरहेका होलान ? धेरैले आश्चर्य प्रकट गरिरहेका छन् । यसले जानेर वा नजानेर दक्षिणपन्थीलाई नै मसला दिइरहेका छन् ।